Jitàna - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Vahoaka jitana)
Sainam-pirenana jitàna, noforonina tamin' ny taona 1933 sy nekena tamin' ny taona 1971.
Dihy an-dalambe ataon' ny Rômany tao Praha tamin' ny taona 2007
Ny Jitàna na Rômanỳ na Tsigàna na Bôhemiana na Rôma dia vondron' olona indô-ariana, mpandehandeha mpifindra monina monina any Eorôpa ny ankamaroany, ary koa mponina am-pielezana any Amerika. Ny porofom-pitenenana sy ny fototarazo dia manondro fa ny jitàna amin' ny maha-vahoaka azy dia avy any avaratry ny Zana-kôntinenta Indiana (avy any amin' ny faritra misy an' i Rajasthan sy i Haryana ary i Punjab ankehitriny).
Niparitaka izy ireo, fa ny mponina marobe indrindra ao Eorôpa dia indrindra ny Eorôpa Afovoany sy Eorôpa Atsinanana ary Eorôpa Atsimo (anisan'izany i Frantsa atsimo), ary koa i Azia Andrefana (Torkia indrindra).
Ny fitenin' izy ireo, ny fiteny rômany, dia avy amin' ny fiteny sanskrita, tenenina ao amin' ny tapany avaratra-andrefan' ny Zana-kôntinenta Indiana, toy ny fiteny gojaraty, ny fiteny penjaby, ny fiteny rajastany ary ny fiteny sindy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jitàna&oldid=1038671"
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2021 amin'ny 12:10 ity pejy ity.